mercredi, 23 janvier 2019 22:32
Antanifotsy - Vakinankaratra: Taolana sisa hita tamin'ilay ombin-tsarety nangalarin'ny dahalo
Tao amin'ny Fokontany Antsahamaina ity tranga ity no niseho. Very omaly talata alina, ary efa hamahana omby maraina ny tompony vao hita fa tsy teo intsony ny ombin-tsarety roa lahy.
Rehefa nikaroka ny Fokonolona dia hita tsy lavitra ny toerana nisian'ny halatra ny omby iray, izay mbola velona, fa ny iray kosa efa taolana sisa tavela.
Mila ho isam-bolana no misy tahak'izao ato amin'ny Distrikan'Antanifotsy, hoy ny fanamarihan'ny mponina.
Miezaka ihany ny mpitandro filaminana fa tsy mahafa-piry, etsy ankilany koa hita ho olona na tambazotra tena efa za-drahara no manao ity asa ratsy ity.
mercredi, 23 janvier 2019 22:23
Ihosy: Nisy namaky ny biraon'ny lehiben'ny Fampanoavana Fitsarana ambaratonga voalohany
Androany tamin'ny valo ora sy sasany maraina hamonjy asa ny lehiben'ny Fampanoavana no tsikaritra io fahavakisan'ny birao fiasany io.
Nikorontana ny birao izay misy dosie saro-pady, nosintonina ny vatasarihana (tiroir).
Nofefena tsy azo idirana aloha ilay birao. Miandry ny fahatongavan'ny "police scientifique" avy ao Antananarivo no hamantarana ny zavatra very.
mercredi, 23 janvier 2019 22:08
Trangam-piainana: Tonga hiala sasatra, hita faty tao anaty rano
Ramatoa be manao fialan-tsasatra eto Toamasina efa ho herinandro ilay hita faty, miboridana natsingevan'ny rano teo ambany tetezan'i Mangarivotra - Toamasina androany maraina.
87 taona izy ary avy any Andranombilaha Toamasina II ny tena ipetrahany. Efa nalain'ny zafikeliny ny razana.
Ho an'ny mpitsabo dia fahafatesana natoraly no nahazo ity ramatoa be ity, na izany aza dia manahy vono olona ny havany tamin'ny fandrenesan'izy ireo fa nisy nihevitra ho mpamosavy tamin'ny fiboridanany ireo havany.
Omaly talata tamin'ny 5ora sy sasany hariva no nahitan'ny havany azy farany.
mercredi, 23 janvier 2019 22:07
Fitsidiham-paritra: Hiazo ny faritra atsimo ny Filoham-pirenena
Hiazo ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny zoma 25 janoary izao. Raha ny loharanom-baovao dia hitsidika an'i Beloha Androy, Ampanihy ary Ankililoaky izy amin'izany.
Distrika isan'ireo nahazoan'i Andry Rajoelina vato betsaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ireo hotsidihany ireo.
Amin'io no fivoahana voalohany an'Antananarivo hataony taorian'ny nahavitany fianianana teo Mahamasina ny sabotsy 19 janoary 2019, nandraisany fahefana feno amin'ny maha filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara azy.
mercredi, 23 janvier 2019 16:39
Sendika SMM: Roa ny kandida hifaninana ho filoha
Hotanterahina amin’ny 15 febroary 2019 ny fifidianana izay ho filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara na SMM.
Roa ny kandida hifaninana, dia Clément Jaona, mpitsara miasa ao amin’ny Conseil d’Etat, sy Andrianiaina Franklin James Rakotomahanina, mpitsara miasa eo anivon’ny ministeran’ny Fitsarana.
Fanirisoa Ernaivo moa no filoha teo aloha, fa nametra-pialana izy rehefa hirotsaka kandida ho Filoham-pirenena.
mercredi, 23 janvier 2019 16:18
Notanterahina androany teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny famindram-pahefana eo amin’ireo Sekretera jeneralin’ny Fiadidiana ny Repoblika sy ny lefiny, ary ny Talen’ny kabinetra teo aloha sy ireo vaovao vao notendrena ny alatsinainy 21 janoary teo.
mercredi, 23 janvier 2019 16:05
Banky Foiben’i Madagasikara: Ireo vola manan-kery eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara
Mampahatsiahy ny Banky Foiben’i Madagasikara fa araky ny sata mifehy azy voafaritry ny Lalàna laharana faha 2016-004 tamin’ny 29 jolay 2016, nofenoin’ny lalàna laharana faha 2016-057 tamin’ny 2 febroary 2017, dia ny Banky Foibe samy irery no manana fahafahana hamoaka vola (na privilège d’émission) eto amin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Ny Banky Foibe ihany no mahazo mamoaka ny vola taratasy sy ny vola madinika izay hany manan-kery ara-dalàna manerana ny tanin’ny Repobikan’i Madagasikara (andininy faha-9).
mercredi, 23 janvier 2019 15:55
Morondava: Mijojo ny orana, miakatra ny ranomasina
Tanàna maro eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe, toa an’Ankisirasira, Ambalanomby, Tanambao, Andabatoara, Nosikely, Morondava Centre no dibo-drano. Maromaro ny trano simba.
Portrait officiel du second Président de la IVe République de Madagascar ANDRY RAJOELINA
mercredi, 23 janvier 2019 13:49
Baolina kitra: Nidoboka any an-dranomasina ny fiaramanidina nitondra an'i Emiliano Sala
Ny alin'ny alatsinaina 21 janoary hifoha ny talata, dia tsy hitan'ny radar intsony ny fiaramanidina nitondra an'ity mpilalao baolina kitra malaza Argentin, Emiliano Sala, ao amin'ny FC Nantes ity.
Niala tao Nantes France izy hiazo an'i Cardiff no izao tra-doza nidoboka an-dranomasina Guernesey-Aurigny, ao amin'ny nosy anglo-normandes, teo amin'ny 8ora alina, izay tokony higadona tao Pays de Galles tamin'ny 9 ora alina.
I Emiliano Sala moa dia mpampidi-baolina nikohizana, ka dia novidian'ny Cardiff City volabe mitentina 17 tapitrisa euros.
Nanao veloma ireo mpiara-milalao taminy teo aloha izy tany FCN La Jonelière alohan'ny andraisany ny fiaramanidina hamonjy ny kilioba vaovao hilalaovany.